Wgha ọjọọ na Social Media Gurus Weave | Martech Zone
Ezigbo Lgha na Social Media Gurus Weave
Fraịde, Machị 27, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nke a bụ rant. Gha, ụgha, ụgha. Ike gwụrụ m nke ukwuu ịnụ ihe nzuzu niile ndị mgbasa ozi 'gurus' na-agwa ndị ahịa ha. N'abalị ikpeazụ m mere a Twitter kọwara ọzụzụ na Linda Fitzgerald na ndị otu ya, ndị jikọrọ Women International. Ndị otu a nwere ụmụ nwanyị azụmaahịa nwere ahụmahụ, ndị nwere ikike. N'okwu ha:
Ọhụụ anyị bụ "inye ụmụ nwanyị ike n'ụwa niile". Ọrụ ahụ bụ ime ka ụmụ nwanyị baa ọgaranya, gbaa ume, ma kwadebe ha n'ụzọ na-eduga n'inye ikike.
Maka ọkara nke nzukọ ahụ, aghaghị m ịhapụ ụfọdụ ụgha ndị a gwara ìgwè ahụ. Nke a abụghị nke mbụ. Ọ chọrọ ka m kpọghachi onye ọ bụla azụ ma mee ka obi jụrụ ha. Mgbasa mgbasa ozi nwere ike ịtụ ụjọ, mana ọ dịghị mkpa ka ọ bụrụ.
Ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ anaghị abịa akwụkwọ ntuziaka.
Ihe kpatara ya bụ na onye ọ bụla na-atụle uru, nzube, ihe ndị na-amasị ya na ihe ndị na-adịghị amasị ya. Mgbasa mgbasa ozi na-enye onye ọrụ ikike… ị nwere ike ịgụ ma ọ bụ ghara ịgụ, soro ma ọ bụ mepee, ịdenye aha ma ọ bụ wepu aha, sonye ma ọ bụ hapụ… ọ bụ gị. Ọ bụghị otu nwoke ka ọ na-ekwu maka onwe ya dịka ụlọ ọrụ ọkachamara ma ọ dịbeghị mgbe ọ bụla gburu a ogologo oge mbọn na ahịa azum na ndu ya.
Ekwula m na ekwesighi iji ozi akpaaka na Twitter. Edego m ihe karịrị ndị debanyere aha 500 na ndepụta RSS nke blọgụ m. Enwere m ihe karịrị 30,000 ndị na-eso ụzọ na Twitter. Ndi mmadu anaghi achikota maka akpaka DM. Achọghị m ịma ma ọ bụrụ na ị masịghị ya. Ikwesighi iso m. Ma ọ bụ nanị pụọ na ha!
Ekwula m na enweghị m ike ire na blọgụ m. Enwere m ike ma na-ere na blọgụ m. N'ezie m gbanwee okwu m wee nweta nsonaazụ kacha mma mgbe m ire nro ma gosipụta ikike na nka m na mbụ. Ama m ihe m na-eme. Na ụlọ ọrụ m, blọọgụ m nwere mgbanwe kachasị nke ndị ọrụ ọ bụla.
Ekwula m na aghaghi m ibiputa vidiyo na Youtube. Ana m eme vidio iji nye nghọta ụfọdụ banyere onwe m na ka ndị mmadụ wee mara m anya, ọ bụghị naanị na ederede. Echere m na ọ dị mkpa, mana ọ bụghị isi ihe ga-eme ka m nwee ọganiihu. Ọ ga - akara m mma ka onye ahịa na - enweghị nsogbu na vidiyo zere ya karịa ịrụ ọrụ dara ogbenye na ya.
Agwakwala m ka m ghara ịkpọsa… ebe niile. Enwere m blọọgụ na-aga nke ọma na ọtụtụ puku ndị nleta kwa ụbọchị, ọtụtụ puku ndị debanyere aha, ọtụtụ puku ndị na-eso ụzọ, na m na-ekwu okwu njikọ (otu na Nzukọ Mba Nile na-abịa na Las Vegas… karịa na nke ahụ n'oge na-adịghị anya), na-eleba egwu egwu, ohere mmemme, na Anọ m na mbido 2 mmalite. Obere ahịrị abụọ ahụ dị na post m apụtaghị na ha na-egbochi m. Agaghị m arịọ mgbaghara maka ịme narị ego ole na ole kwa ọnwa maka otu narị awa + m tinyere na nkezi izu.
Agwakwala m na m kwesịrị sonye na mkparịta ụka ahụ na Facebook. Achọghị m ịma ma ọ bụrụ na ị nweta azụmahịa na Facebook. M na-agbalị ya. Emeghị m. Yabụ ọ bụrụ na m rụọ ọrụ ntanetịime na blọọgụ m na Twitter ebe ahụ wee banye otu ugboro n'ọnwa, ọ dị m mma. Facebook bụ AOL mbipute 20… ma ọ bụ MySpace 3.0… ejiri n'aka na ọnụọgụ na uto… mana a ga-enwe ihe ka mma na-abịa. Ọ bụ ya mere m ji hụ weebụ n'anya. Agaghị m egwu egwuregwu m niile, netwọkụ na mmekọrịta m na netwọkụ mmekọrịta… Aga m edebe nke ahụ na blọọgụ m nwere / ọsọ / direct / backup / monitor na-ekele gị nke ukwuu.
Ekwula m na enweghị m ike izipu ozi email nwere otu nnukwu onyonyo ma enweghị ederede na mkpọsa ahịa email m. Emere m ya ma nweta nzaghachi kachasị elu nke mkpọsa anyị ọ bụla. Nweta ya.
A gwala m ka m ghara cuss. Ana m ezere ịkọcha n’ onlinentanet ruo n’ókè o kwere mee n’ihi na ọ na-adị m ka ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù nye ndị na-ege m ntị. Ma, ọ bụrụ na ị chọrọ cuss, akọcha pụọ! Ekwesighi m ịgụ ya (ọ bụ ezie na m gụrụ saịtị ole na ole na-aga nke ọma). M na-ahọrọ ịghara.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba ọsọ gị Kpata Ego Ngwa atụmatụ na Twitter. Gaa maka ya! Ọ bụrụ na ị na-erite uru na ya, ọ dị mma maka gị. (Agaghị m eso gị ma ọ bụ nye gị nlebara anya ọ bụla.) Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchọta njikọ gị ọzọ na Facebook, gaa maka ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji Twitter dị ka Nchọgharị Nchọgharị, Gaa maka ya! M na-eji ya dị ka akọrọ ozi ọma… M hụrụ n'anya na ịpị njikọ, na-esonye mkparịta ụka ahụ, na-enyere mmadụ aka, ma ọ bụ na-anwa ịkwọba okporo ụzọ na blọọgụ m. Hapụ m aka! Enwere m ike iji ya n'agbanyeghị ihe m chọrọ!
Mgbe ị gara ngosi, gụọ blog, lelee webinar na ụfọdụ guru amalite ikwu okwu twetiquette, na ihe ikwesiri ime ma obu ihe ekwesighi ime… oke nke ndi na-eso uzo gi na ndi i na-eso, wdg. Ndị a gurus amaghị ihe azụmahịa gị bụ, ihe ụlọ ọrụ gị bụ, ihe asọmpi gị, ụdị ịre ahịa gị, otu ị si edozi ngwaahịa gị ma ọ bụ ụdị gị. Olee otú ha nwere ike ikekwe gwa gi otu esi eji soshal midia?!
M na-ege m ntị azum na m gbalịrị, esi tụọ nsonaazụ ya na ihe rụrụ ọrụ / ihe anaghị arụ ọrụ. Ana m akọwa ọrụ na atụmatụ nke ngwaọrụ ndị ha nwere. M na-agba ndị ahịa m na ndị na-ege ntị ume ịnwale. Ana m agba ume ka m tụọ. Ana m agba ha ume ka ha tinye ike zuru oke na enwere obi ike na ma ọ bụ ezigbo ụzọ maka gị. Ihe na-arụrụ m ọrụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka gị… na Anglịkan.
Social media enweghị akwụkwọ iwu.
-eme ka gị chịrị ka ị na-aga… naanị ijide n'aka na ị ga-atụ ka ị na-aga. Nwere ike iji oge dị ukwuu na-achụ ihe ndị na-egbu maramara na enweghị nloghachi na itinye ego.
Tags: elekọta mmadụ media gurusmgbasa ozi mgbasa oziSocial Media Marketing
Justin Kistner kwuru
Mar 27, 2009 na 2: 52 PM
Enwere m mmasị na nnukwu ozi nke post gị gbasara ebe a, nke bụ na enweghị iwu. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na enwere “iwu” na oge ụfọdụ ịmebie ha nwere ike ịga nke ọma karịa iso ha.
Ekelere m ozi ahụ ka m nwee ụzọ ọhụụ, ọ bụghị ịbụ ndị na-azụ atụrụ.
Mar 27, 2009 na 4: 24 PM
Ajụjụ: Kedu ihe dị iche na iwu na ezigbo echiche?
A: Iwu bụ naanị ihe ndị mmadụ mebere. Ezi echiche bu abamuru otutu mmadu, ikekwe obula onye obula.
Doug zuru oke: enweghị iwu na mgbasa ozi mmekọrịta. Ofwa nke iwu na-anọghị n'ịntanetị, mana enweghị ndị nkịtị, ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị ọka ikpe na-agagharị na ntanetị.
Agbanyeghị, enwere ezi echiche na echiche ọjọọ dị ukwuu. Ọmụmaatụ nke nnukwu echiche ọjọọ bụ ụgha. You nuru maka ihe jọgburu onwe ya Doug Karr mere na ngwụcha izu ụka gara aga? Ezi, n'ihi na m mere ya. Ikwu okwu ugha ma obu ikwuputa agwa mmadu na ntaneti nwere ike inwe nsogbu ndi ozo na offline. Na mgbakwunye na ịhazigharị okwu a, Doug nwere ike iziga Vinny ka ọ gbajie ikpere m ma ọ bụ jiri ikpe na-ejere m ozi.
Ndi ndoro-ndoro ochichi nke Doug bu echiche ojoo kari? Echeghị m otu ahụ, mana ekwenyesighi m na ha niile bụcha ezigbo ntụnye, kwa. N'ezie, ị nwere ike izipu ozi email nke mejupụtara naanị onyonyo ma nwee mmasị n'ọtụtụ ndị ahịa gị. Ime nke a ga-emekwa ka ndị anaghị ahụ ụzọ. Maka nke a, agbalịrị m ịgbaso Iwu Veen ma zere itinye okwu na nkọwa. (Mana echeghị m.) Flickr kwesịrị ịbụ ihe megidere iwu. Nke ahụ dị n'elu.)
N'otu aka ahụ, Nchekwa onwe-DM ga-ewepụ ntakịrị pasent nke ụmụazụ ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị enweela 1,000s nke ndị na-eso ụzọ. Agaghị m adụ ya ọdụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na twitter ka m na-ebu amụma na ọ ga-egbochi uto gị.
Enweghị iwu na mgbasa ozi mmekọrịta. Mana enwere ezigbo echiche, m na-achọ ụfọdụ. Mara ihe ọ bụla?
Mar 27, 2009 na 4: 56 PM
Nke a bụ ọgụgụ isi ma bụrụ eziokwu. Enwere m olileanya na ndị mmadụ na-ege ntị / ịgụ ga-a attentiona ntị. Enweghị iwu mgbe ọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ịkparịta ụka n'socialntanet. Ihe na-arụ ọrụ na ngalaba agụmakwụkwọ m nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka onye ọzọ na teknụzụ ụwa. Nnukwu ihe.
Akara "Rizzn" Hopkins
Mar 27, 2009 na 7: 51 PM
Ekwenyere m na post gị n'ozuzu. A na-edegharị iwu mgbe niile. N'ikwu ya, ọ nweghị iwu.
Onweghi otu uzo n’ahia ahia n’elu Ntaneti.
Enwere usoro * kachasị mma iji mee ụfọdụ ihe na ịntanetị. Enwere ụzọ ziri ezi na ụzọ na-ezighi ezi iji kesaa usoro vidiyo na-akwado mgbasa (ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ihe ịga nke ọma, ya bụ), dịka ọmụmaatụ. Enwere ụzọ ziri ezi iji tinye ego na blọọgụ ma ọ bụrụ na ọ bụ isi okwu akụkọ (nke mgbasa ozi abụọ ahụ nwere ike ịmepụta ọdịdị adịghị mma).
Enwere * ọkachamara na mgbasa ozi ọha na eze, n'ihi na ụfọdụ n'ime anyị na-eme nke a ihe karịrị afọ iri, ma rụọ ọrụ kachasị mma maka ọrụ na ebumnuche ndị a na-ahụkarị.
N'aka nke ọzọ, mụ onwe m na-ejikarị oge m etinye oge dị mma na-agbaso ndụmọdụ ọjọọ n'ihi na ụfọdụ "ọkachamara" debere iwu mgbe m gụsịrị ọnwa atọ nke Mashable na Techcrunch wee kpebie na ha kwesịrị ịbụ onye pro na azụmaahịa ahụ .
Mar 27, 2009 na 9: 38 PM
Daalụ Mark! Ikwu gị bụ mmụọ m dere na post a. Naanị m chọrọ ka ndị mmadụ mara na teknụzụ a ekwesịghị ịtụ ụjọ, ọ ga-enyere aka!
Mar 27, 2009 na 11: 25 PM
"Ofwa nke iwu na-anọghị n'ahịrị, mana enweghị ndị ọka iwu}, ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị ọka ikpe na-agagharị na ntanetị." Ọfọn, e nwere n'ezie ndị ọka iwu, ndị uwe ojii NA ndị ikpe (ndị nke ikpeazụ bụ ndị na-ekpe ikpe karịa ndị ụlọ ikpe!), Na ikwutọ na DMCA bụ nanị ole na ole (mana ndị a ma ama) usury na cyberspace.
Anaghị m ekwenye n'okwu ahụ bụ "omume kacha mma" eji dị ka milder ma ọ bụ n'ụzọ dị iche iche nke okwu "iwu", ebe ọ bụ na ọ bụ naanị ụzọ ọhụụ kachasị mma isi kwuo "iwu". A na-etinye ihe omume kachasị mma na ntinye akwụkwọ ma eleghị anya, ma ọ bụghị ọdịnaya (ọzọ karịa ụdị & ụtọ asụsụ & mkpoputa, na nke ahụ Kachasị Omume FTW, mana ụtọ asụsụ, na mkpope anaghị eme ọdịnaya - naanị ha na-eme ka ọdịnaya nwee nghọta na nghọta, nke kwesịrị ịnọgide na-adị mkpa).
Dịka ị hụrụ - Edebela m iwu ebe a - mana ọ bụghị iwu banyere etu m ga-esi tinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ịbịaru nso, yabụ agaghị m.
Mar 28, 2009 na 5: 07 AM
Edere nke ọma, obi ike, eziokwu blog post.
Ma ndị mmadụ kwenyere n'echiche nke post ahụ dịịrị ha mana…
Nke a bụ ihe dị mkpa ederede blọgụ maka obodo niile. Jide n'aka na ị ga-erube isi n'iwu ndị dị mkpa:
Jikọọ & mekọrịta
karie ihe niile: mara onye ahịa gị ma ọ bụ iche.
Akwa post. Jide ka iji.
DM arụmụka bụ ezigbo ihe na post nwere ike iji echiche ka ukwuu na isi okwu gị n'ihi na ị na-bang-na mana ppl mkpa ihe mere DM nazis ji nutz
Mar 28, 2009 na 9: 52 AM
Kpọmkwem. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-achọ iwere onwe ha dị ka “ndị isi echiche” site n’ibipụta ihe ndị a na-eme na ihe ndị na-ekwesịghị ime. Eziokwu bụ na anyị nọ n'ọhịa anụ ọhịa nke West West nke mgbasa ozi mmekọrịta na ihe ọ bụla na-aga.
Mar 28, 2009 na 1: 00 PM
Adam Na Na Na
Mar 28, 2009 na 10: 17 AM
Na akpaaka-DM si:
Ndo, njirimara akpaaka-DM bụ spam, nke doro anya ma dịkwa mfe. Kedu ihe kpatara ị ga - eji chọọ akpaaka nkwukọrịta na mbụ? Ọ na-egosi enweghị nsọpụrụ maka ndị na-eso gị, imo. Ikwuru eziokwu - enweghị iwu, agbanyeghị m chere dị ka ndị na-ere ahịa n'otu oge anyị gara aga na-anwa ịgha ndị ọzọ?
Jiri nlezianya na-agba ndị mmadụ ume cuss - cheta, ọ bụghị mmadụ niile nọ n'ọnọdụ ị nọ. Ndị nọ n'ọkwa dị ala nwere ike tufuo ọrụ ha ma ọ bụ nwee ike mbute ọdịnihu ha mgbe ndị were gị n'ọrụ hụrụ na ha na-azụ ahịa n'ihu ọha na mbụ. Iji akọ na-aga ogologo oge ebe ahụ.
Mar 28, 2009 na 1: 04 PM
RE: Spam - Nanị ụzọ ị ga - esi nweta Auto-DM bụ ma ọ bụrụ na ị soro mmadụ someone nke ahụ bụ opt-in. Ma ị na-enwe ekele maka ozi a ma ọ bụ na ọ nabaghị ya apụtaghị na ị nyeghị onye ahụ ikike izi gị ozi.
Enwere m ekele maka DM DM na anaghị ahụ ha dị ka SPAM. Ọ ga-amasị m ịmatakwu banyere onye m na-eso ma nweta nzaghachi ozugbo dị ka nke ahụ dị mma. O siri ike ihichapụ ha.
Re: Cussing - Anaghị m agba ndị mmadụ ume. N'ezie, m ga-agba ndị mmadụ ume ka ha ghara. Nanị m na-ekwupụta na ọ na-arụ ọrụ ụfọdụ ụfọdụ, ọ yighịkwa ka ọ ga-ewute ha. Ọ bụ naanị 'iwu' anaghị arụ ọrụ maka onye ọ bụla (mana ọ na-arụ ọrụ maka m).
Ọ bụ Christopher Harley
Mar 28, 2009 na 10: 58 AM
Fool me otu ugboro, ihere me gi. Ghaa m nzuzu ugboro abụọ, ihere me m. Participating banyeghị na mkparịta ụka a pụtara na ị hapụla mkparịta ụka ahụ. Ọ bụrụ na abịara m na blọọgụ gị, nke ị nwere / ọsọ / aka / ndabere / ma nyochaa, mgbe ahụ ana m atụ anya na mkparịta ụka anyị ga-aga n'ihu mgbe ahụ
Ọ bụrụ na ị dozie usoro ihe omume wee dọpụta, agaghị m abịa. Ihe m ga - eme, ọ bụrụ na m kwanyere ọrụ gị ùgwù, bụ iwere ọdịnaya gị gaa ebe ọzọ ma soro ndị ọzọ nwere echiche nke nyocha nke ikwupụta okwu banyere ya. Ihe ị nyere nwere ike ịbụ echiche bara uru mana ihe ị hapụrụ anyị, ọ bụrụ na ịnweghị ịga n'ihu, ọ bụ traktị fallow.
Mar 28, 2009 na 1: 06 PM
M na-eso mgbe niile na mkparịta ụka ahụ. Ma mmadụ zara m na Plaxo, LinkedIn, ma ọ bụ Facebook - Ana m eweghachi ozi ahụ mgbe niile. Ihe m na-ekwu bụ na enweghị m 'bang maka ego' na-etinye oge dị ukwuu na mpaghara ndị ahụ, yabụ ana m ewetara ndị na-eso ụzọ m ozi ahụ ebe ahụ. Ọ bụrụ na ha azaghachi, m na-aza. Anaghị m ewere ha dị ka isi ụzọ m na ịkparịta ụka n'.ntanet.
Jiri nkwanye ugwu dị ukwuu.
Mar 28, 2009 na 12: 49 PM
Sheesh, Doug. Echere m na mmadụ nwere panti gị n'ime draya ogologo. Ọfọn, echere m na m kwenyere na gị (naanị gụọ ya otu ugboro). Kpachara anya banyere “ndị ọkachamara” niile. Chọọ ndị enyemaka.
Mar 28, 2009 na 1: 37 PM
Fantastic post Doug! Ndị mmadụ na-ajụ m kwa ụbọchị, 'Ọrụ ndị dị a shouldaa ka m kwesịrị iji bulie azụmahịa m? Olee otu m ga-esi jiri ha mee ihe? ' Amaghim !!! Have ga-ebu ụzọ lelee ọtụtụ ihe gbasara azụmahịa gị. Enweghi onye nkwụsị-ngwọta maka usoro mgbasa ozi mmekọrịta.
Ihe kachasị mma i nwere ike ime bụ ịme atụmatụ site na iji ụfọdụ ezi ịkọ nkọ dabere na ozi na ahụmịhe gị dị ugbu a, mepụta atụmatụ ahụ, tụọ nsonaazụ ya, wee tụfuo ihe anaghị arụ ọrụ (ebe ị na-abawanye ihe na-arụ ọrụ, n'ezie).
Mar 28, 2009 na 7: 16 PM
Ezi iru uju daalụ maka ide ihe a. Ekwenyere m na 100%. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịjụ ma ọ bụ jiri ya ọchị ma ọ bụ bọọlụ ojii ma ọ bụ ihe ọ bụla n'ihi na anaghị m '' kwụ n'ahịrị '' - nwee ya. Ekwesighi m ịgbaso iwu ọ bụla ma m zuru oke na azụmahịa m na-eme ya n'ụzọ m. Enwere m iwe n'agbanyeghị, ọkachasị ụfọdụ mkpokọta weebụ / ụdị ndị (ọ bụla m) na-eme dị ka lemmings na onye ọ bụla na-agagharị na-adabere n'ihe ụfọdụ ndị na-ekwu okwu na-ekwu.
N'okpuru ala, mee nhọrọ ndị gụrụ akwụkwọ, mana… chee echiche n'onwe gị.
Mar 28, 2009 na 7: 28 PM
re: twitter auto follow - Anaghị m eji ya wee nọrọ ihe dịka ndị na - eso ụzọ 2500. Ka oge na-aga na ọsọ nke m na-enweta ndị na-eso ụzọ na-abawanye na ọ na-esiwanye ike ịza onye ọ bụla na-eso ihe ọ bụla yiri “ekele m”… oge ọ bụla na-eso ụzọ na-esochi, yabụ Enwere m ike ịhụ ojiji maka akpaaka na-eso. Togaghị ịbụ onye ma ọ nwere ike ịbụ mmega ahụ na-ewe oge. Anyị ga-emerịrị ibe anyị na Twitter ma emechaa. Ọ bụrụ na m ga-eji akpaaka na-eso, ọ nwere ike bụrụ naanị ịsị ekele ma ghara "ree" ihe ọ bụla… naanị ekele dị mfe. Onwe m “lelee blọọgụ m” akpaaka DMs na-akpasu m iwe. Otu ekele dị mfe agaghị.
Mar 28, 2009 na 8: 40 PM
Doug - Shhhh. Na-ahapụ nwamba ahụ n'akpa. Ọ bụrụ na ndị mmadụ achọpụta, ha ga-achọpụta na enweghị nnukwu mkpa maka onye na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ na-amachaghị ihe gbasara mpaghara nka ha karịa onye isi ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ha nwekwara ike ịchọpụta na imirikiti ndị ọkachamara a bara uru dị ka ndị na-egbu mmiri na "Akwa Ọchịchị Emperor."
Oh, na Ihọd na-asị “iwu mgbanwe” nke a abụghị SEO ebe e nwere n'ezie ụfọdụ vaporous iwu na-adị. Na soshal midia, enweghi iwu.
Mar 28, 2009 na 10: 24 PM
Iwuli atumatu egwuregwu ma were uzo di nma banyere onye ‘di nma’ puru inyere ulo oru aka itinye ihe nlere n’oru ha n’uzo zuru oke, ma dozie ha nke oma, ma zoputa ha otutu oge ime ya. Anaghị m akwado ịkwado naanị ya, m na-emegide ndị ọkachamara ahụ na-ere usoro anwansi… anyị niile maara na ọ nweghị otu!
Mar 28, 2009 na 8: 42 PM
Uzo ohuru ohuru ohuru di na nwata ya n’enye gi ihe omuma. Ọ nwere ike ịnwe mkpesa zuru oke ma kwe ka nnwere onwe mepụta ọtụtụ ndị ọrụ, mkpa, mmadụ.
O doro anya na ụfọdụ ndị ọrụ ga-achọ 'ịnweta' mgbasa ozi ọhụụ, iji gosipụta ikike na nka dị ka ụzọ isi bulie onwe ha elu ma ọ bụ uru. Nke a yiri ka ọ bụ ihe ebumpụta ụwa n'ihe ọ bụla mmadụ na-eme.
Onwe m, ọ masịrị m n'oge mbido ọgba aghara mgbe ihe ọ bụla yiri ka ọ ga-ekwe omume: Ọ dị ka akwaa dị ọcha. Otú ọ dị, a na-apụghị izere ezere, ụmụ mmadụ na-alaghachi ngụgụ n'usoro na njikwa.
Janice Dimaano (NWAANYI)
Mar 29, 2009 na 9: 03 AM
Achọtara m nnwere onwe mgbe m gụrụ ihe ị dere. Enwere m ihere na mbido inyocha ma nwaa ihe ọhụrụ na Twitter. Anọ m na-ele. -amụta site na ndị ọzọ na naanị n'anya Twitter onyinye nke ike ịkọrọ na-amụta site n'aka ndị ọzọ.
Mgbe ahụ otu oge m gụrụ enweghị m ike biputere ihe onwe m na-aga ná ndụ m .Eziokwu m achọta tweeting dị ka otu n'ime ngwaọrụ kachasị arụ ọrụ ndị nọọsụ na-arụ na mmemme anyị na nke ahụ nwere ike ịpụpụ ma gosipụta ihe ọ bụla ị na-agabiga n'ime gị. Nanị ihe ọ na-eme bụ inyeaka na ibelata ihe mgbu na nrụgide nke ndụ.
Ọ dị mma ịmara na m nwere ike ịbụ ihe m bụ. Enwere m ike ikwupụta echiche m na ụdị m dịka ọ dị. Daalụ maka nnwere onwe ahụ, hụrụ ya n'anya! Ee!
Mar 29, 2009 na 12: 24 PM
Na-enye ume ọhụrụ ịgụ ozi sitere n'aka onye na-arụ ọrụ ahụ. Kedu ka m si mara? N'ihi na enwere m ahụmịhe site na ịme ya ma mara na ọ bụ eziokwu.
Isi Okwu: Jiri usoro mgbasa ozi ọ bụla ịchọrọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwulite azụmaahịa site na iji akụ nke mgbasa ozi mmekọrịta. Gaa maka ya ma jiri ihe na-arụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, Facebook arụ ọrụ m. Anọgidere m na-eji ya ma ọ bụ akụkụ nke usoro mgbasa ozi mgbasa ozi anyị na-emejuputa maka ndị ahịa.
Daalụ maka ọnọdụ a akọwapụtara nke ọma.
John Jantsch - Duct Mezie Marketing
Mar 29, 2009 na 4: 24 PM
O doro anya, ihe egwu dị na Doug a bụ na ị na-eyi uwe dị egwu na-enye nso dos ma ghara ịmụrụ onwe gị, naanị usoro dị iche iche ma ghara iche na ụmụ okorobịa ndị ọzọ.
Echere m na ezigbo ozi ahụ, na n'uche m, ị na-ekwu okwu a, bụ na n'agbanyeghị ihe akụrụngwa ahụ bụ, iji ahịa gị na ebumnuche gị ga-ekwupụta ya. O doro anya na etu ụfọdụ ndị mmadụ si agwa gị na ị ga-eji usoro mgbasa ozi na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. . . na, ụzọ ndị ị na-atụ aro bụ ntụpọ doro anya maka gị, na ndị ọzọ, ma ọ bụghị ihe niile.
Ezigbo ihe egwu bụ mgbe ndị mmadụ bidoro ikwupụta ụzọ dị mma na ezighi ezi iji mee ihe ọ bụla - naanị ụzọ ziri ezi, dị ka ị gosipụtara, bụ nke na-arụ ọrụ maka ọnọdụ gị pụrụ iche.
elekọta mmadụ media bụ ngwá ọrụ, ọ bụghị okpukpe!
Mar 29, 2009 na 5: 31 PM
Na-ekwu nnukwu okwu - echekwara m na ị na-akọwa nke m ọbụlagodi. Achọghị m ịmaja, Achọrọ m inye ike. Ikwenye ndị mmadụ chọrọ ka onye na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta na-ele mmadụ anya n'ihu, mana mara ihe.
Dịka ọmụmaatụ, abụ m onye ofufe StumbleUpon, ma amaara m na ọ na-eme ka omume m na nchọgharị m kwekọọ karịa Digg. Nke a apụtaghị na ndị ahịa m kwesịrị ịhapụ iji Digg ma wụpụ na StumbleUpon, tho!
Kama nke ahụ, m na-akọwa etu aga - esi jiri nke ọ bụla mee ihe, atụmatụ pụrụ iche, otu ha siri rụọ n’oge gara aga, ma gbaa onye ahụ ume ka ọ nwalee nke ọ bụla. Anyị nwere ike ịlele mmetụta nke mbọ ha wee hụ nke bara ha uru (ma ọ bụ ọbụlagodi ma ha abụọ nwere ike!).
Mar 31, 2009 na 10: 54 PM
Ekwenyere m na ihe niile ị dere Doug, ahụrụ m otu ọnọdụ ebe a n'Australia.
Echere m na iwu ndị metụtara ya bụ iwu nke omume ọma na omume ọma. O nwere ike ịbụ na weebụ ma nke ahụ apụtaghị na ị ga-eji nkwanye ugwu na nsọpụrụ
Apr 9, 2009 na 11: 02 PM
Enwere mkpụrụ okwu abụọ batara m n’obi
Kamal Tahir kwuru
Jul 24, 2011 na 8:28 PM
Enweghị iwu ọ bụla na nke ọ bụla; ọwa, elekọta mmadụ, direct / katalọgụ, email, web… ị kpọrọ ya. ewezuga iwu ọ bụla FTC manyere. Nsonaazụ ga-adịgasị iche dabere na ndị na-ege gị ntị, yabụ ị chọpụta ụdị iwu ịchọrọ ịgbaso maka azụmaahịa gị.